Maika ny asa | NewsMada
Maika ny asa
Par Taratra sur 15/02/2019
Maro ny laharaham-pahamehana ! Mazava ny filamatry ny filoham-pirenena Rajoelina Andry. Maika ny fampandrosoana an’i Madagasikara, hialana amin’ny fahantrana. Mahakasika lafin-javatra maro izany teniny izany ary efa nambarany mialoha ny vinany hanatanterahana azy. Notsindriany ombieny ombieny fa harahi-maso ao anatin’ny enim-bolana ny mpanatanteraka, ary hotsaraina afaka herintaona.
Raha raisina ny antsipiriany vitsivitsy, misy tokoa ny hita sy fantatra tato ho ato. Tsy hitsara avy hatrany isika, fa anjaran’ny tsirairay ny mijery araka izay fandraisany azy. Na izany aza, tsy azo odian-tsy hita ny zava-misy. Manomboka ny asa fanamboaran-dalana, hanitarana ny arabe eto an-dRenivohitra, hiatrehana ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny haratsian-dalana. Tsy atao tampitampina lavadavaka (tip top), toy ny hita hatramin’izay, fa fanarenan-dalana mafy sy maharitra, mahatanty ny orana, ohatra.
Fototry ny tsy fandrosoana koa ny tsy fandriampahalemana an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra. Miha masiaka ny jiolahy, tsy mitsitsy ain’olona intsony. Nandraisana fepetra hentitra, nesorina ny tompon’andraikitry ny zandary eny Mahitsy, satria maro ny fitarainan’ny mponina eny an-toerana. Nisesy ny fisamborana olona manana ny lazany, voarohirohy amin’ny raharaha mafana, toy ny trafika andramena, hosoka any amin’ny ladoany. Mipoitra ny raharaha fanodinkodinana volam-panjakana tamin’ny fahazoana tsenambaro-panjakana. Ady amin’ny kolikoly avokoa ireo voatanisa ireo, fototry ny fahalovana amin’ny raharaham-pirenena.
Etsy ankilany, manomboka ny asa “tena fampandrosoana” voarakitra ao anatin’ny vinan’ny filoha Rajoelina. Hatao eny Ambohitrimanjaka sy Ambohidrapeto ny tanàna vaovao “Tanamasoandro”. Haorina eny Ivato ny trano avo “building” sy ny “trano mora”. Efa hita ny velaran-tany 100.000 ha hambolem-bary. Hanafatra solika mivantana ny Jirama, hampihenana ny saran’ny herinaratra. Maika avokoa ireo asa ireo, satria maika hahita fandrosoana tokoa ny Malagasy.